"13 Fa izahay tsy maintsy misaotra an’ Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malalan’ ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin’ ny voalohany hahazo famonjena amin’ ny fanamasinan’ ny Fanahy sy ny finoana ny marina, ...5 Ary ny Tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin’ ny fitiavana an’ Andriamanitra sy ho amin’ ny faharetan’ i Kristy." 2 Tesalonianina 2:13-3:5
Feno fankasitrahana an’Andriamanitra ny Apostoly satria isan’ireo izay nofidiana ho amin’ny famonjena ka mitombo fahamasinana sy finoana ny fiangonana tao Tesalonika (13-14). Na dia isan’ireo nofidiana aza isika dia mila mamaly ny antson’ny Tompo mba ho isan’ny olom-bonjena. Ny tanjon’i Kristy koa dia ny hamoazantsika be ka haharetan’ny vokatra (Jaona 15:16). Izany no tokony hitomoerana tsara (15). Tsy avelan’ny fampianarana marina tsy hanam-panantenana sy fiononana isika (16-17) raha hazonintsika mafy izany ka tsy ketraka isika.
Finoana miasa. Ilàna vavaka ny fitoriana ny Filazantsara mba hisian’ny vokatra tsara sy maharitra (1) ary ho fiarovana amin’ny fahavalo (2-3). Misy fiainana haterak’izany Filazantsara izany eo amin’ny andavan’androntsika ary handraisana fanapahankevitra matotra ny hanana fitondrantena mendrika (3-5). Hatramin’ny voalohany tokoa dia nantsoina hiasa ny lehilahy (Genesisy 1:15). Tsy ozona akory ny asa. Nanome ohatra ireo Apostoly tamin’izy ireo tsy novelom-potsiny (7-9) fa niasa sy nikely aina no sady nitory (10). Toa misy anefa ny olona sasany malaina na fetsifetsy, mpanararaotra (11). Ireto farany no hiantefan’ny fananarana atao am-pitiavana mba “hiasa tsara” fa izay “tsy miasa aoka tsy hihinana” (12-15).
Manam-pitiavana. Amin’izao vanimpotoana sarotra izao koa no hikatonan’ny fon’ny maro, ary misy ny kristianina, amin’ny fanaovan-tsoa amin’ireo izay tena sahirana. Misy mantsy ny te-hiasa mafy fa tsy mahita na tsy afaka noho ny toe-pahasalamana, ny amin’izy ireny dia mila fanampiana tokoa sy fijerena manokana. Aza ketraka amin’ny fanaovan-tsoa (13).